The Ultimate Tech tojupụtara maka Ndị Na-arụ Ahịa Dị Ukwuu | Martech Zone
Na 2011, onye ọchụnta ego Marc Andreessen dere nke ọma, sọftụwia na-eri ụwa. N'ọtụtụ ụzọ, Andreessen kwuru eziokwu. Chee echiche banyere ọtụtụ ngwanrọ ngwanrọ ị na-eji kwa ụbọchị. Otu ama nwere ike ịnwe ọtụtụ narị ngwanrọ ngwanrọ na ya. Ma nke ahụ bụ naanị otu obere ngwaọrụ na akpa gị.
Ugbu a, ka anyị tinye otu echiche ahụ na azụmaahịa ụwa. Otu ụlọ ọrụ nwere ike iji ọtụtụ narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku, nke ngwanrọ ngwanrọ. Site na ego rue oru ndi mmadu na ire ahia, ngalaba obula na-adabere na teknụzụ na ikike ụfọdụ. Ọ bụrụla ihe dị mkpa iji na-azụ ahịa n’ụwa taa.
Ire ahia adighi iche. Ọtụtụ ndị ahịa ahịa nke oge a na-adabere n'ọtụtụ ngwanrọ dị iche iche dị ka ọrụ (SaaS) iji mee ka mmekọrịta ndị otu na-emekọ ihe ọnụ, jikwaa ọrụ na-aga n'ihu, na ịgbaso arụmọrụ mkpọsa. Ma gafere Ngwaahịa 7000 SaaS naanị na oghere ahịa, ọ nwere ike isi ike ikewapụ ndị ga-enwe si ọmarịcha inwe.
N'isiokwu a, m ga-atụle nke ọma ihe ngwanrọ ngwanrọ dị na teknụzụ azụmaahịa gị yana ihe kpatara ya. Na mgbakwunye, aga m ekerịta ụfọdụ ihe atụ akọwapụtara n'ụzọ.
Kedu ihe bụ Marketing Stack?
Usoro ahụ nchịkọta ahịa na-ezo aka na nchịkọta nke ngwanrọ ngwanrọ na teknụzụ nke ndị ahịa na-arụ ọrụ ha. Ọ dara n'okpuru okwu nche anwụ dị ukwuu nchịkọta teknụzụ nke ndị ọkachamara IT na-ejikarị agụnye asụsụ mmemme na usoro maka mmepe ngwa.
Nchịkọta ahịa bụ ezigbo ndepụta nke ihe ga - enwerịrị ihe ga - enyere gị aka ime ọrụ kacha mma. Ngwaọrụ ndị a dị mkpa maka ịkwalite arụmọrụ, na-akwalite mmekorita, na imeziwanye nkwukọrịta.
Etu ị ga-esi wuo teknụzụ ahịa kachasị elu
Naa, e nwere software nke fọrọ nke nta ihe nile. Izọ m si ahụ ya, e nwere ụdị ngwaọrụ SaaS abụọ: ga-enwe na ọmarịcha inwe.
Ngwa ndị ga - enwerịrị bụ ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ ọrụ gị. Ndị mma-to-haves dị mma, naanị mma ịnwe. Ha nwere ike inyere gị aka ịmekwu ihe ma ọ bụ hazie, mana ọ ga-ekwe omume ịkụ ihe mgbaru ọsọ gị na enweghị ha.
Ọ dị mkpa ka ịchekwa ikpo ahịa gị. Gịnị mere? N'ihi na ngwanrọ dị oke ọnụ. Ezigbo ọnụ. Ndị ọchụnta ego nwere ike ifu puku kwuru puku dọla na akwụkwọ ikike sọftụwia ejibeghi ma ọ bụrụ na ha ejighị nlezianya tụlee ngwaọrụ ndị dị mkpa.
Tụkwasị na nke a, ịnwe ọtụtụ ngwaahịa SaaS nwere ike ịme mgbagwoju anya ma mee ka o sie ike ịnọ na-ahazi. Software kwesiri ime ka ndu gi di mfe, obughi ihe siri ike.
N'okpuru ebe a, ị ga - ahụ ndepụta nke ngwa SaaS kwesiri inwe maka ịdebe ngwa ahịa gị:
Njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) Ezubere sọftụwia iji nyere azụmaahịa aka ịbawanye njikọ aka ma wulite mmekọrịta n'etiti ndị ahịa ha na ndị ahịa.
Imirikiti ngwaọrụ CRM na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa data nke na-echekwa ozi ndị ahịa na mmekọrịta. N'ime ngwa ọrụ ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịhụ akụkọ ihe mere eme nke mmekọrịta dị n'etiti onye ahịa, yana ozi metụtara azụmaahịa ahịa na-aga n'ihu ugbu a.
A na-ejikarị sọftụwia CRM eme ihe site na ahịa, ahịa, na ndị isi ọrụ.
Ndị otu ahịa na-adabere na CRM iji hazie ozi metụtara atụmanya na ohere. Ndị isi na-eji ya n'otu aka ahụ, iji lelee anya na ego na pipeline ahịa. N'akuku ahia, CRM bara uru maka nsuso ahia tozuru oke na ohere.
CRM dị mkpa iji dozie ọdịiche dị n'etiti ndị ahịa na ndị ahịa na ịmezi usoro ka mma na nzukọ niile.
Ihe atụ CRM
E nwere ọtụtụ narị ngwaọrụ CRM dị iche iche n'ahịa. Ndị a bụ ụzọ ole na ole:
Salesforce - Salesforce bu onye na - eweta ndu CRM software nke igwe ojii maka ulo oru nha. Agbanyeghị CRM bụ isi onyinye nke Salesforce, ụlọ ọrụ ahụ gbasaa usoro ngwaahịa ya gụnyere ọrụ ndị ahịa, azụmaahịa azụmaahịa na azịza azụmahịa. Na ihe fọrọ nke nta 19% ngụkọta ahịa niile, Salesforce na-achịkwa ohere CRM. Na ezi ihe kpatara ya - a na-ahọpụta ọkwa dị elu n'etiti ndị ọrụ na ndị nyocha maka ike igwe ojii ya siri ike, ọkachasị ma a bịa na oghere ụlọ ọrụ.
Kpọtụrụ Highbridge maka Enyemaka Salesforce
Obere iwe CRM - Emebere CRM erughị ala ezubere maka obere azụmaahịa ndị dị mkpa maka ngwa ọrụ dị mfe na-enweghị mgbịrịgba na mkpọrọhịhị niile. Ọ kwụ ọtọ n'okwu, ị nwere ike ịsị, “ewela iwe”!
Banye maka obere iwe CRM
Njikwa njikwa ngwanrọ na-enye ndị otu ohere imezi nkwukọrịta, jikwaa usoro ọrụ, yana ịdebe taabụ na atumatu ọrụ ugbu a, ha niile n'otu ebe.
Ọ bụ ihe nkịtị maka ndị ahịa na-arụ ọrụ na gburugburu ebe ha na-arụ ọrụ bụ isi na-adabere na oru ngo. N'agbanyeghị usoro ịzụ ahịa ị na-arụ n'ime, ngwa ọrụ njikwa dị ezigbo mkpa iji nọrọ na-ahazi ma soro ọganihu ọrụ.
Ọtụtụ ihe ngwọta dị na otu a ga-enye gị ohere ịmepụta usoro nhazi ọrụ maka ọrụ kwa ụbọchị / kwa izu, na-enyere gị aka ịza ajụjụ maka oge na-abịa. Nke a na-enye aka ma ọ bụrụ na ndị otu gị na-arụ ọrụ zuru oke ma ọ bụ nke dịpụrụ adịpụ.
Ihe Nlere Software Management Project
Nchịkwa oru ngo bụ ahịa juru ebe niile, yana ọtụtụ azịza na ọnụahịa dị iche iche. Ihe atụ gụnyere:
Asana - Asana bụ usoro nhazi usoro ihe omume kachasị elu maka usoro azụmaahịa niile. Ngwaọrụ ahụ na-enye ọtụtụ njikwa njikwa ọrụ nke na-enye ohere maka mmekorita na nhazi. Asana na-akwado arụ ọrụ otu yana ọrụ nke ọ bụla, na-enye onye ọrụ ohere ịhazi ọrụ nke ha ma nye aka na mmemme otu. Ndị ọrụ nwedịrị ike ịrụ ọrụ ha na kalenda, na-eme ka ọ dị mfe ịhụ ihe ruru na mgbe.
Gbalịa Asana n'efu
Adaba - Wrike bụ ngwa njikwa ihe eji arụ ọrụ nke ejiri atụmatụ ụlọ ọrụ maka azụmaahịa na ọnọdụ ogo-eto. Ọ bụ ezie na Wrike na-enye ọtụtụ njikọta nke ụlọ ọrụ, ihe ngwọta ahụ ka na-arụ ọrụ zuru oke maka etiti ahịa na obere azụmaahịa.
Bido maka n'efu na iku
Na 2016, ụlọ ọrụ ahụ gbasaa akara ngwaahịa ya gụnyere Wrike for Marketers, ngwá ọrụ ezubere iji designedomie usoro ọrụ azụmaahịa.
A na-edozi Wrike for Marketers iche iji nyere ndị otu na-azụ ahịa aka ịhazi ma mezuo atụmatụ ndị a na-ahụkarị dịka okike ọdịnaya, njikwa mmemme, na ịmalite ahịa. Ngwaọrụ ahụ na-enye ndebiri ndebiri iji nyere gị aka ịmalite.
Ahịa akpaaka sọftụwia na - enyere ndị na - azụ ahịa aka rụọ ọrụ na - arụ ọrụ metụtara ọgbọ na - eduga, mgbasa ozi mgbasa ozi na ozi ịntanetị.
Ewezuga uru nchekwa oge doro anya na-abịa n'ụdị ngwa ọrụ a, sọftụwia azụmaahịa na-enye aka ịmepụta ozi ahaziri gafee mkpọsa dị iche iche na-enweghị mkpa mbọ aka. Enwere ike ịtọbe mkpọsa ndị a ka ha na-agba ọsọ na elekere, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnọghị iji jikwaa ha.
Ahịa akpaaka Ihe Nlereanya
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ngwa ngwa akpaaka iji jikọtara ya na teknụzụ ndị ọzọ n'ime usoro ikpo okwu niile.
HubSpot - HubSpot bụ ewu ewu na-aga n’ihu maka ịzụlite azụmaahịa, ire ahịa na ngwa ọrụ ndị ahịa ha chọrọ ịga nke ọma. HubSpot's Hub Hub bụ onyinye na-enye aka maka ịre ahịa azụmaahịa. Ngwaọrụ nwere obosara nke ikike metụtara edu ọgbọ, ahia email, na nyocha.
Malite na Hubspot
MailChimp - Ihe malitere dị ka naanị ahịa ahịa email toro wee bụrụ MailChimp ama ama niile na-ere ahịa akpaaka na-arụ ọrụ maka obere azụmaahịa.
MailChimp na-arịọkarị obere azụmaahịa n'ihi atụmatụ ọnụahịa ya na-agbanwe agbanwe.
Enwere ihe nlere efu nke na-enye ọrụ niile nke ngwa ahịa azụmaahịa maka azụmaahịa na mbido ha. MailChimp ọbụna na-enye atụmatụ ịkwụ ụgwọ-ka-ị ga-aga maka otu ndị na-ezube iji ngwa ahụ lee-ma-e-ebe.
Ngwaọrụ njikarịcha Search Engine
Emebere sọftụwia nchọta (SEO) sọftụwia iji nyere ndị azụmaahịa aka ịkwalite ọkwa ọchụchọ ha wee bụrụ ndị nwere ike ịchọpụta.
Ngwaọrụ SEO na-enye ọtụtụ atụmatụ bara uru iji nyere ndị na-ere ahịa aka ịme nnyocha isiokwu, wuo backlinks, ma rụọ nyocha nke ọdịnaya weebụ dị adị iji melite ogo dijitalụ n'ozuzu. Ọtụtụ n'ime ihe ngwọta ndị a nwekwara ikike nyocha na-enyere ndị ọrụ aka ịlele ma tụọ mmetụta nke mbọ SEO ha.
Ngwunye ahịa kachasị dị irè na-enye ndị ahịa gị ikike iji obi ike mee mkpebi. Dị ka SEO, ọ dị m mkpa ịnweta ngwa nyocha isiokwu dị ka Semrush, njikọ njikọta ngwa ọrụ dị ka Ahrefs, yana ngwa nyocha dịka Google ma ọ bụ Adobe Analytics. Ihe ọ bụla ọzọ dị mma ịnwe, mana ọ dịghị mkpa.
Liam Barnes, Onye Ọkachamara SEO Ọkachamara na Ntuziaka
SEO Software Ihe Nlereanya
Ozi oma. Ikwesighi ibu onye okacha mara ka imutara SEO software.
Ọtụtụ SEO ngwanrọ ngwọta dị omimi na mfe iji, ọbụlagodi maka ndị mbido. N'aka nke ozo, enwere ngwa oru SEO di elu n'ebe ahu nke choro ike ngwanrọ ngwanrọ. Ihe niile dabere na ihe mgbaru ọsọ ị na-achọ iji mezuo site na nyocha ihe ọmụmụ!
Ahrefs - Ahrefs na-enye akụrụngwa nke SEO ngwaọrụ nwere ike dị iche iche gụnyere nyocha isiokwu, nyocha ọkwa, njikọ njikọ, na ịkọ akụkọ. Nke a bụ ngwaahịa niile enyere iji nyere ndị na-ere ahịa na ndị ọkachamara SEO nke ọkwa niile aka ka ha bulie ogo azụmaahịa ha.
Bido Nnwale Ahrefs Gị
Ahrefs malitere dị ka isi ihe ọrụ backlink; agbanyeghị, onyinye ọ gbasaa agbasawo ụlọ ọrụ dịka onye ọkpụkpọ kachasị na oghere SEO. Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa SEO dị mfe na-eme (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) ihe niile, Ahrefs nwere ike ịbụ nhọrọ maka gị.
ScrogFrog si SEO Ududo - ScreamingFrog bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ọchụchọ na UK nke mara maka ngwaahịa SEO Spider. The SEO Ududo bụ a na-ewu ewu web crawler eji na-eduzi na-omimi oru SEO SEO. N'iji ngwá ọrụ ahụ, ndị ahịa na-achọpụta njikọ ndị agbajiri agbaji, redire redire, kpughere ọdịnaya abụọ, na ndị ọzọ. The SEO Spider ngwọta na-arụ ọrụ a kapịrị ọnụ nke kachasị mkpa na SEOs SEO. Ngwaọrụ a kachasị mma yana ngwa SEO niile, dịka Ahrefs. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ngalaba ọrụ nke ihe, ScreamingFrog na-enye nsụgharị n'efu nke ka nwere nyocha nyocha dị mkpa.
Download Iti mkpu Frog SEO Spider
Njikwa Mgbasa Ozi
Ngwaọrụ soshal midia na-enye ọrụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịtọọ oge, nweta nyocha ndị ọrụ dị elu, na nyochaa akara aha… ịkpọ aha ole na ole.
Nke a nwere ike ịba uru bara uru maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ buru ibu na-agba ọtụtụ profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta n'otu oge. Enwere ike ịhazi ozi maka ụbọchị ma ọ bụ izu tupu oge eruo, na-enye gị ikike itinyekwu oge na atụmatụ okike karịa iji aka bipụta akwụkwọ ọ bụla.
Nlekọta Nlekọta Mgbasa Ọha na Ọha
Toolsfọdụ ngwá ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche, ebe ndị ọzọ na-ekwu okwu ma ọ bụ lekwasịrị anya n'otu njirimara, dị ka nlekota oru mgbasa ozi. Ka anyị leba anya n’ihe atụ ole na ole:
Okpukpe Social - Sprout Social bụ ngwa ọrụ anwansi niile maka njikwa njikwa mmekọrịta. Ihe ngwọta na-enye ndị ọrụ ọtụtụ atụmatụ nke atụmatụ gụnyere akpaaka akpaaka, nchịkọta njikọta granular, na ịkọ akụkọ arụmọrụ.
Bido Nnwale Ọnwụ Ọha na-akwụghị ụgwọ
A maara Sprout Social maka interface enyi na enyi ya yana ike ịkọ akụkọ dị elu. Ọ bụrụ na ịre ahịa mgbasa ozi bụ isi ihe na-akpata azụmaahịa gị, Sprout bara uru itinye ego ahụ.
Hootsuite - Hootsuite bụ usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-ewu ewu maka ndị mmadụ na azụmaahịa niile. Ngwaọrụ ahụ na-enye atụmatụ oge niile dịka ịhazi usoro ihe omume, yana atụmatụ dị elu dịka dashboards a na-ahụkarị, njikwa mgbasa ozi ọha na eze, na nyocha ọgụgụ isi azụmahịa.
Rịọ a Hootsuite ngosi
Isi ihe dị iche iche nke Hootsuite? Ọnụ ọnụ ya. E nwere ọbụna a free tier na-enye ohere maka mmachi usoro ihe omume ike. Ọ bụrụ na ndị otu gị chọrọ azịza dị ọnụ ahịa dị ọnụ ala karị nke ka na-arụ ọrụ nke ọma, Hootsuite bụ nhọrọ siri ike.
Nchịkọta Njikwa ọdịnaya
Usoro njikwa ọdịnaya (CMS) na-enye ọrụ iji jikwaa, chekwaa ma bipụta ọdịnaya dijitalụ. Nke a gụnyere ederede, eserese eserese, vidiyo, ọdịyo, na akụ dijitalụ ndị ọzọ niile na agbakwunye na ahụmịhe webụsaịtị. A CMS na-enye gị ohere ịnabata ọdịnaya a niile na-enweghị mkpa iwu koodu ọhụụ site na ncha.
Ọ bụrụ na ndị otu gị na-achọ ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ mgbe niile, mgbe ahụ ihe ngwọta CMS bụ mkpa. Imirikiti ngwaọrụ CMS na-enyekwa ọrụ SEO ọzọ nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịkwalite ọdịnaya maka ọchụchọ ihe ọkụkụ - nke nwere ike inye aka mee ka ọ bụrụ ihe achọpụtara.
Ihe Nlereanya CMS
Họrọ ezigbo CMS maka azụmahịa gị nwere ike ịbụ aghụghọ n'ihi na ngwa ọrụ ahụ kwesịrị ijikọ ọnụ na akụrụngwa weebụsaịtị gị. Ezigbo obi, a na-ahazi azịza njikwa ọdịnaya iji mee nke ahụ. N’okpuru, ị ga - ahụ nhọrọ abụọ a ma ama:
Hubspot CMS Hub - Dịka e kwuru na mbụ, HubSpot bụ onye na - eweta ngwanrọ maka ịre ahịa, ire ahịa na ndị ọrụ ndị ahịa. Onyinye CMS nke HubSpot bụ nhọrọ ama ama maka ọtụtụ ndị otu na-ere ahịa ọdịnaya. Ihe ndi ama ama gunyere ide edemede, ihe ndezi ederede, na dashbod dikwa ike.
Rịọ a Hubspot CMS Ngosi
Ebe ọ bụ na ikpo okwu HubSpot abịarutela na ngwọta ndị ọzọ etinyere dịka CRM na akpaaka azụmaahịa, nke a bụ nhọrọ amamihe maka ndị na-ere ahịa chọrọ ngwaahịa niile. Na mgbakwunye, HubSpot CMS na-enye gị ohere ịme gwakọtara na egwuregwu atụmatụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị nabata blọgụ gị n’elu ikpo okwu dị iche, mana ka ị na-ejikwa CMS HubSpot maka ibe ọdịda nke weebụsaịtị gị, ị nwere ike.
WordPress - WordPress bụ usoro njikwa ọdịnaya na-emeghe emeghe. Akụrụngwa ahụ na-arụ ọrụ n'ụzọ na-enye ndị ọrụ ohere ịwụnye plugins na ndebiri dị iche iche iji hazie arụmọrụ na ọdịdị nke weebụsaịtị ha.
Bido saịtị WordPress
WordPress bụ otu n'ime ihe eji eme CMS kacha ochie na ọtụtụ ebe na ahịa. Site na nke ahụ, ọ bụkwa akụrụngwa na-akwado onwe gị, nke pụtara na ị ka kwesịrị ịchọta onye na-eweta nnabata web ma mepụta koodu omenala ka ọ rụọ ọrụ.
Maka onye na-azụ ahịa tech-savvy na-achọ ohere na-enweghị njedebe, WordPress ga-abụ ezigbo enyi gị.
Mee Ya nke Gị
Ọ dị mkpa iburu n’uche na ndepụta a adịchaghị oke ịgwụcha agwụcha.
Y’oburu na ibu jack of all trades, inwere ike iji ngwa oru komputa ihe ndi a niile n’ime ha; ị nwere ike ịnwe ngwaọrụ dị iche iche nke na-arụ ọrụ nke ọma maka ebumnuche gị. Ọ bụrụ na ọrụ gị lekwasịrị anya na ọrụ a kapịrị ọnụ, dị ka mgbasa ozi dijitalụ, ọ ga-ekwe omume na nchịkọta ahịa gị dị ntakịrị.
Ihe dị ukwuu gbasara nchịkọta teknụzụ bụ na inwee ike ịme nke gị. Site n’iburu ndụmọdụ ndị a n’uche, ị nwere ike kọwaa ihe ndị kachasị mkpa ga - eme ka ndị ahịa gị nwee ọpụrụiche.
Sọftụwia ire ahịa dị ike dịka onye ji ya. Chọpụta otu otu ndi nduzi nwere ike isi nyere ahia gi aka gbatịkwuo ngwa ngwa teknụzụ gị iji nyefee nsonaazụ ahịa ọchụchọ siri ike.
Ngosipụta: Enwere njikọ njikọta ejiri na edemede a.
Tags: ahrefsAsanaCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaka esi arụ ụlọ okpukperechiHubspot Igweobere manụ crmmailchimpMarc Andreessenakụrụngwa ahịaahia teknụzụteknụzụ ahịa ahịamartech tojupụtaranjikwa ọrụsaasndị ahịasearch engine njikarịchanjikwa elekọta mmadụWordPress